Nuxurkii Khudbad Madaxweyne Siilaanyo ka jeediyay shir lagu soo bandhigay qorshe hawleedka dawlada | Somaliland.Org
October 26, 2011	“Qorshahani wuxuu ina siinayaa jihada aynu u socono waana mid aad ugu hambalyaynayo Wasiirka Qorshaynta”
“Inagoo og mandaqada aynu ku nool nahay waa inaynu waxa ina soo gala intooda badan u leexinaa nabadgelyada”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaaanyo) ayaa maanta Huteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa ka furay shir ku saabsan qiimaynta qorshaha horumarinta dalka ee shanta sanadood ee fooda inagu soo haya, kaasi oo ay raaci doonaan qaadhaan bixiyeyaasha iyo Ha’yadaha caalamiga ah ee Somaliland kala shaqeeya dhinaca horumarinta.
Shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxa soo qaban qaabisay wasaarada qorshaynta waxaana ka soo qeyb galay Wasaaradaha, Ha’yadaha dawliga ah ee madaxa banaan iyo kuwa caalamiga ah.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ka hadlay furitaankii shirkaasi waxa uu sheegay in baahi weyn loo qabay qorshahan, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Waxa farxad weyn ii ah inaan maanta inoo furro xaflada shirkan ku saabsan qorshihii mudada dheer ee aanu u samaynay dalka Somaliland oo ah qorshe horumarineed oo shan sanad sanadoodle ah in dalka qorshe loo dhigaa waa wax caadi weeye, waa wax dalal badani sameeyaan. Dalkeenu hore wuu u samayn jiray anigaaba markii aan wasaarada qorsheynta joogay samayn jirnay qorsheyaasha shanta sanadood ah. Waxay dalka iyo dadka siinayaan jihayn halka aynu ku socono iyo hababka aynu u marayno ayay waddo cad oo aynu u marno inoo jeexayaan.”
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in qorshani uu sawir ka siinayo beesha caalamka jihada ay Somaliland u socoto waxaanu yidhi “Mida labaad dunida aynu ku xidhan nahay ee deeqbixiyeyaashu ka midka yihiin ama kuwa doonaya inay dalkeena maalgashadaan ayay fikir ka siinaysaa jidka aynu marayno. Maalin walba dunidu way inoo timaadaa, caalamka waynu u tagnaa wax baynu waydiisanaa waxay ku odhanayaan maxaanu idiin qabanaa? Haddii waxaad doonaysaa aanay kuu cadayn oo aanu qorshe kuu oolin kolba wax baad ka tagaysaa. Laakiin markay haystaan qorshe muddo dheer ah oo muujinaya dalku jihada uu u socdo iyaguna (deeqbixiyeyaashu) waxay ku xisaabtamaan oo ay ku tallo galaan ayay haystaan. Qorshahani dalka gudahiisa iyo caalamka inala dhaqmayaba aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay.”
“Waxa lagama maarmaan ah Qorsheyaasha in siday u kala mudan yihiin loo kala horeysiiyo, waxa lagama maarmaan ah marka dawladu ay samaynayso miisaaniyad sanadeedkeeda sanad walba inay ku tallo-gasho qeyb ka mid ah horumarinta. Arrimaha la xidhiidha horumarinta waa in qorshe hagaa jiraa oo lagu tilmaan qaadan karaa haddii la gelinayo waxbarashada, beeraha, Xoolaha, ceelasha iyo waddooyinkaba waa inay mudnaantu ka muuqataa wixii la gelinayo. Sidaasi daraadeed dadka iyaguna maalgashanaya dalka haddii ay Soomaali yihiin iyo haddii ay ajanabi yihiinba waa inay qorsheyaashaasi raacaan,”ayuu yidhi Madaxweynuhu waxaanu tilmaamay inay xukuumad ahaan fulin doonaan qorshahan waxaanu yidhi “Qorshahaas shanta sano ah aad iyo aad ayaan idiinku boorinayaa inaynu kuligeen ku wada shaqyn doono. Anaguna dawlad ahaan waanu ku tallo galaynaa inaanu qeybta nagaga beegan ka fulino.”ayuu yidhi Madaxweyne Siilaanyo.
Madaxweynuhu waxa uu ku ammaanay Wasiirka qorshaynta samaynta qorshe hawleedkan. “Waxaan maanta anigu hambalyo aad ah u soo jeedinayaa Wasiirka wasaarada qorshaynta qaranka iyo shaqaalihiisa, waxaanan ku hambalyaynayaa inay soo celiyeen tubtii qorshaha dawlada ee shanta sanadood ah, qorshahaas shanta sano ah oo had iyo jeer ah dariiqa cad ee aynu u marayno horumarinteena,”ayuu yidhi Md. Axmed Siilaanyo.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in dhaqaalaha ina soo gala intiisa badan loo leexiyo dhinaca nabadgelyada waxaanu yidhi “Inagu wakhtigan aynu joogno waynu ognahay mandaqadan aynu ku nool nahay waxa ka taagan dhibaatooyin faro badan oo xaga Nabadgelyada ah ma aha horumarinta oo qudha waxa laga hadlayaa waxa weeye khayraadka ina soo gala wax badan waxaynu u baahan inaynu siino ama u leexino (u dunno) xaga nabadgelyada oo aad iyo aad muhiimu ah oo aynu ognahay in colaad faro badani inagu furan tahay, sida budhcad badeedda iyo Argagixisada inala dagaalamaysa iyo qaar doonaya inay ina dhibaan , qaar doonaya inay nabadgelyadeena khalkhaliyaan iyo qaar doonaya inaanu dadkeena iyo dalkeenu aanu xasilin, laakiin waxaan ku kalsoon nahay ILAAHAY-na ka baryayaa in dadkeenu sidii awalba ay isku xidhnaan jireen ay iskugu xidhnaan doonaan oo dalkoodana ay daafici doonaan, nabadgelyadiisana daafici doono oo ilaalin doono horumarkiisa, isku xidhkiisa iyo wada shaqayntiisa taasna aynu ka soo bixi doono.”
Sidoo kale, waxa xafladaasi ka hadlay Wasiirka qorshaynta qaranka Md. Sacad Cali Shire waxaanu tilmaamay inay dedaal weyn u galeen sidii ay dawlada Somaliland ugu samayn lahayd qorshe hawleed shan sanadood ah oo laga duulo.
Wasiirku waxa uu tilmaamay in qorshahani sal u noqon doono maareynta mashaariicda horumarinta dalka taasi oo ku salaysan baahida dalka.
Previous PostUrur siyaasadeedka SSC oo Lagaga dhawaaqay Hargeysa iyo maxaabiistii kalshaale oo la cafiyayNext PostMadaxweynaha Somaliland oo Martiqaad ka helay Guddoomiyaha MidawgaAfrika oo Olole Doorasho	Blog